Izinto ze-5 omele wazi malunga neCisco CCNA Certification | IYO
Yintoni iCCNA Certification?
Ziziphi iintlobo zezihloko eziqingqiweyo zeCisco CCNA Certification?
Ziziphi iindleko zokuthatha uvavanyo lweCisco CCNA Certification?
Ndakuya phi na ukufumana i-CCNA ehamba phambili yokufunda izikhokelo?
Indlela yokucwangcisa uviwo lweCCNA Certification?
Ixesha kunye nomsebenzi okhutheleyo ekufunyaneni isatifikethi sobugcisa ngokuxhomekeka kuphelela ekuzuzeni ngokukhawuleza. Cisco CCNA Certification enye yenkqubo enokukunceda ukuqinisekiswa kwamakhono omntu kwintsimi ethile kwaye ibangele ukuxhaswa kwenkxaso kwinqanaba elilandelayo.
I-CCNA iyancatshiswa njengeCisco Certified Network Associate, inkqubo yokwenza isatifikethi sokuziphendulela. Ngelo xesha xa umntu efumene ngokuphumeleleyo isiqinisekiso, bajongwa njengobungcali kwiinkqubo zolawulo kunye namanqanaba afanelekileyo.
Uvavanyo lweemviwo luhlolwe kwaye lunikezwa yi-IT eqinile kwiCisco. Ukuqwalasela indlela eyenziwa ngayo yonke imboni ifuna amalungiselelo okulungelelanisa, i-qualification ifumaneke kakhulu phakathi kwabaqeqeshi be-IT kwaye i-standout phakathi kweenkqubo eziziwayo eziqinisekileyo.
Ngoxa iprogram sele ijikeleze iminyaka emibini ngoku, umbutho weCisco ophezu kwenkqubo yokuqinisekisa iqhubeka ekuphuhliseni nasekuguquleni izifundo ngenjongo yokuba zilungele ukutshintsha iipatheni zoshishino.
Ukuhlaziywa okuphawulekayo kwenzelwe kunyaka lwe-2013 xa bezakhele uvavanyo lweemfuno ezithile ezahlukahlukeneyo ezenza ukuba ootitshala babe nolwazi oluthile kwicandelo elithile. Isibalo se-9 eyahlukeneyo ye-CCNA iindimu zifikeleleke kwaye unokukhetha ityala elikhethekileyo ngokubhekiselele kwiinjongo zakho ezizayo.
CCNA Cloud - Esi sifundo sigxininisa ekuphumeni kwefu, ukugcinwa kwezinto kunye nokulungiswa kwamafu e-Cisco. Xa kufakwe i-cloud innovation ukuba ibonakale ngokuqhelekileyo, oku kubonwa njengomjelo ophawulekayo ngabaphathi abaninzi beemvavanyo.
CCNA Ukubambisana - Iingcali ezisebenza kwintetho ye-IP, iindawo zokucwangcisa zinokukhetha ukusebenzisana okuyikhosi efikelela kwizinto ezihlukeneyo ezichazwe ngezwi, idatha, ividiyo kunye nezicelo eziphathekayo.
CCNA Cyber ​​Ops - Isiqinisekiso xa sigqityiweyo sibonisa uchwephesha onguchwepheshe wokhuseleko lwe-cyber uxhotyiselwe ukujongana nokukhuseleko oluphezulu lwentlangano.
ICNA Data Centre - Izihloko ezihlanganiswe kulo vavanyo oluthile lubandakanya ukwakha isikhungo seenkcukacha, ukucwangcisa inkqubo, ukulawulwa kwedatha, ukugcina i gear kunye ne-hardware.
CCNA Industrial - Isatifikethi sikwenza umntu aqonde iinkqubo zolawulo kunye nemisebenzi efunekayo ukuqhuba ngokusetyenzisiweyo iziseko zoshishino kuquka ioli, igesi, indawo yamandla kunye nokuhlanganisana.
CCNA Ukuhamba kunye nokutshintsha Isifundo esisisigxina sokuba iCisco igxininise ngokubhekiselele-yinto efunekayo imfuneko yokuba zonke iinkqubo zakha kwaye luvavanyo olusisiseko naluphi na uqeqesho lwenkqubo olusenokuthatha.
CCNA ukhuseleko - Umntu ophelisa le nkqubo uqinisekisiwe ukuba unokufumana ulwazi olwaneleyo ekuncedeni idatha, ukujonga ukufikeleleka kwalo, ukwabelana kwaye kunokukunceda ukuhlanganisa isiseko esiphezulu esicwangcisiweyo kwishishini.
CCNA ngeNkonzo - Ikhosi igqityiwe ngabantu abasebenzela ukubhalisa njengeengcali zenkqubo ukuze bancedise imibutho njengenkonzo. Ukugqiba ikhosi, zidinga iimpawu ezigqwesileyo kunye nokuguquka okuqinileyo kwiipatheni zangoku kwiinkqubo zolawulo.
CCNA Wireless - Zonke iinkqubo ezingenazintambo zokulawulwa kwezixhobo ezinxulumene neziphumo ziqinisekisiwe xa ugqirha uphetha lo msebenzi ngokugqibeleleyo. Bawongamele ukulungiselela, ukugcina umgangatho wezandla kunye nokuseka isakhelo esingenasiphelo esingenantambo.
I-CCNA nganye yeemviwo iimviwo kufuneka zijonge kuphela. I-Cisco ine-costume ye-CCNA yokuhlola i-$ 295 nganye. Uqikelelo lungahle luguquke ngokubhekiselele kwisithili ohlala kuso, utshintshe amazinga kunye neenguqu ezahlukeneyo. Kuyinto eqiqayo ukuhlola indawo esemthethweni ngaphambi kokuba ufake isicelo sokuhlola.
Ukufumanisa mahala CCNA zo ku fundisa phezu kwewebhu akuyona ingxaki njengoko unokucinga. Kukho ii-asethi ezimbalwa kunye nababoneleli benkonzo yokuvavanya abanganikela nganye yezikhokelo ezingundoqo zamaxabiso.
Nangona ezinye zezi khokelo zifikeleleka kwi-intanethi njengesiqhagamshelo sokukhuphela, kwi YouTube kunye nezikhulu zecandelo lolawulo, ungavumelana nokwamkela iiprojekthi ezizimeleyo ezinikezelwa yimibutho ecatshangelwayo. Ukuvumelanisa ukwamukela ezo zifundo kunceda ukufumana oku kutshanje CCNA zo ku fundisa kubalulekile kungekho nto ngeendleko kunye nootitshala abancedisayo kubaqeqeshi abaphumelele ngokugqibeleleyo iimvavanyo zeCisco.
Ngaphambi kokuba uthathe uvavanyo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba akukho siqinisekiso sobungakanani sokuthatha uvavanyo lwethemba. Noko ke, i CCNA Ukuhamba noTshintsho sisiseko somnye uvavanyo. Ijongwa njengento enzima kakhulu kwaye iya kukukunceda ukucima iimviwo ezixakekayo.
Ngeenkalo ezisi-9 ezikhethekileyo zokujonga, iimeko zokucima uvavanyo zixhomekeka kwiimeko ezinokuzifumana ngayo ensimini.
I-CCNA iikholeji zokufundisa kunye neemodyuli ziyimfuneko yokuqonda kakuhle i-syllabus ngaphambi kokuzama ukuvavanya
Eneneni, nokuba ngumqeqeshi we-IT onokuthatha ixesha elide lokubandakanyeka kwintsimi kufuneka acinge ngeendlela zokusebenzisa izikhokelo aze aqonde ukuyilo lophando. Kuya kunceda umntu afaneleke ukufumana umgangatho wokuqala.
Thatha abaninzi baqhuba iimviwo, yindlela ephakanyisiwe kakhulu. Inceda ekuphuculeni ubuchule bakho, udlulise iimpendulo ngokukhawuleza kwaye uyakukubeka ukuze uphumelele ekupheleni kovavanyo lwonyaka ngaphandle kokuziva utyhafile.
Uvavanyo lujoliswe kwisibalo se-1000 ephakamisa apho kufuneka ufumane i-825 ukuze ufaneleke.
Ngaphantsi kweminye imizuzu ye-30 imele isetyenziswe imihla ngemihla ukusetyenziswa kweencwadi njengeendlela zokufunda ngokucwangcisekileyo kuyisisiseko sokufumana yakho CCNA. Ngethuba lokufumana ukuba naluphi na lwezifundo ezixakekayo, cinga ukutshala imali engaphezulu okanye ujoyine isilungiselelo sokuthembeka. Fumana iimvavanyo zamahhala kwiwebhu kwaye uzenzele iveki ngeveki.
Ukungafani nezinye iinkqubo ezininzi zokuqinisekisa izakhono, i-CCNA yiCisco ibonwa njengengxaki ngenxa yokuba kufuna umntu ukuba ahlale ehlabathini kunye nolwazi oluxhomekeke kwintsimi yabo. Kukho nawuphi na, xa uzibophelela ekuqondeni iingcamango uze uthathe emva koyilo olusisigxina lokufunda, kulula kakhulu ukuphendula imibuzo ekuvavanyeni kwangempela.
Ukongezelela, imibutho yangempela emhlabeni jikelele iqhubeka ifuna abaqeqeshi bokuqinisekisa ukuba bajoyine iqela labo. Yiba yinkqubo yokulawula i-wireless, umphathi wokhuseleko okanye umlawuli wendawo yedatha, iindawo ezisebenzayo zenza umsebenzi omkhulu wokuzikhethela. Umsebenzi onokuthi uphuhliso nophuhliso olunikezwa ngu-a CiscoCCNA Certification uqiniseke ngokuqinisekileyo ixesha elichithwe ngokuzibeka kuloo vavanyo.